Rose Archives - Pop Channel
Rosé ရဲ့ Hairstyle နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါသထွက်နေကြတဲ့ ပရိသတ်တချို့ကို စိတ်ပြေစေခဲ့တဲ့ Rosé ရဲ့ဖြေရှင်းချက်
The Album အတွက် BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တွေနောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Online fansign မှာ BLINK တစ်ယောက်ဟာ Rosé ရဲ့ဆံပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုမေးခွန်းအတွက် Rosé ရဲ့ အဖြေဟာဆိုရင်…
W Korea နှင့်အတူလှပတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Rosé
BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Rosé ဟာ W Korea ရဲ့ October Issue အတွက် Cover Model တစ်ဦးအဖြစ်လှပတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ဒီရိုက်ကွင်းမှာတော့ Rosé…
TIFFANY&CO ရဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုဆင်မြန်းခဲ့တဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Rosé
BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Rosé ဟာ W Korea Magazine ရဲ့ Oct 2020 အတွက် မျက်နှာဖုံးထက်မှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာထက်က Rosé ရဲ့ပုံရိပ်ဟာ ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သလိုပဲ…
အကသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက် Lisa ကိုအတုယူခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ Rosé
24/365 အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ အပိုင်းမှာ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ သူတို့ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ Training ရက်တွေကအ‌မှတ်တရဖြစ်စရာအကြောင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့အတူ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Rosé ကလည်း အကသမားကောင်းတစ်ယောက်လိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကနိုင်ဖို့အတွက် Lisa ကိုအတုယူခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း‌ကိုပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။…
BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Rosé ကိုတကယ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာဟာဘာများဖြစ်မလဲ ?
Rosé အတွက်ကတော့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်တွေဟာ တကယ်ကိုပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Rosé ရဲ့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့ နောက်ထက်အရာတစ်ခုကတော့ရှိနေပါသေးတယ်။ Rosé ဟာ Instagram မှာ Live လွှင့်ရင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့မေးခွန်းတွေကိုပြန်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။…
Rosé တစ်ယောက် ဘာလို့ ထောပတ်သီးကိုမကြိုက်တာလဲ?
BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Rosé တစ်ယောက်ထောပတ်သီးကို လုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတာတော့ သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေသိကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ထောပတ်သီးကိုမကြိုက်ရသလဲ ဆိုတာတော့ သိသူနည်းနေဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ Elle Korea ရဲ့အင်တာဗျူးမှာ Rosé ဟာဝန်ထမ်းတွေဆီက အထူးလက်ဆောင်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။…
BLACKPINK ရဲ့လာမယ့် comeback နဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ခံစားချက်တချို့ကိုပြောပြခဲ့တဲ့ Rosé
မကြာသေးမီက BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Roséဟာ ‘ELLE Korea’ magazine ရဲ့ cover model အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး interview ဖြေဆိုခဲ့တယ်။ ထို interview မှာတော့…
‘ELLE Korea’ ရဲ့ magazine cover မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Rosé
‘ELLE Korea’ ဆိုတာကတော့ ကိုရီးယားရဲ့ style and beauty လောကမှာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး Magazine တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလထဲမှာ‌ပဲ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Rosé ဟာ ‘ELLE…
Hyeri ရဲ့မွေးနေ့မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Birthday Gift ပေးခဲ့တဲ့ Rose
Hyeri ဟာ June9ရက်နေ့ သူမမွေးနေ့မှာ Rose account ကို Tagg တွဲပြီး အရမ်းလှပတဲ့ ပန်းစည်းပုံလေးကို သူမရဲ့ Instagram stories…